Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Talaabo Talaabo Talaabo ah oo ku saabsan Dayactirka iyo Sida Loogu Iibsado Qasabadaha qasabadaha khadka tooska ah
2020 / 11 / 19 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9806 0
Dareer yar oo ka yimaada tuubada cilladaysan ayaa u muuqan kara wax yar oo dhib ah, laakiin xaqiiqdii waxay kugu kici kartaa kumanaan kun oo doolar sanadkii muddo dheer. Kahor intaadan dooran iibso qasabadaha internetka waxay kuugu fiicnaan doontaa inaad taqaanno sida loo raadiyo qasabadda khaldan. Xaaladaha badankood, waa shaqo DIY ah xitaa waad sameyn kartaa adigoon caawimaad ka helin xirfadle. Qoraalkan waxaan ku sharxeynaa sida looga baaro nidaamkaaga biyaha cilladaha yaryar, dooro ikhtiyaarka ugu fiican ee qasabadaha, ka dibna loo beddelo qaybta cilladda leh. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ku akhrisato qoristaan ​​taxaddar iyo feejignaan.
Maxaa qaladka loo raad raacayaa?
Aad ayey uga muhimsan tahay raadinta cilladda oo beddel qasabadda haddii kale dhibaato ayey kugu noqon kartaa adiga mustaqbalka. Waxa lagu daaweyn karaa marxaladda ugu horreysa qaddar yar oo dayac ah ayaa laga yaabaa inay kugu kacdo lacag aad u badan haddii aad dayacdo. Markaad raadiso cilladda, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad raadiso qiimo dhimista qasabadaha internetka.
Sababaha qasabadaha biyaha daadadaan
Qasabadaha ayaa si macquul ah aad ufudud u ah in la hagaajiyo-marka aad fahanto sida saxda ah ee ay u shaqeeyaan iyo sidoo kale waxa la sameeyo si loo dayactiro. Waxyaabaha soo socdaa waa dhawr ka mid ah sababaha qasabaddaagu u bilaaban karo inay soo daadato:
Tuubbooyinku waxay bilaabaan inay daadadaan markii dhaqe, O-ring, ama shaabbada gudaha tuubada ay wasakh yihiin qashin, lagu daboolay saliid dhigaal ah, ama si fudud loo daalay. Wax ka qabashada tuubada way fududahay, si kastaba ha noqotee, way ka duwan tahay ku tiirsanaanta nooca tubbada aad haysato.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u fahamto khariidaddaada tuubada, waxaad si sax ah u kala qaadi kartaa tuubbada, waxaad ku dhejin kartaa kheyraadka qulqulka, ka dib markaa wax ka beddel qaybaha la isticmaalay ama waxyaabaha wasakhda ah ee nadiif ah Waxa kale oo ay kuu sahlanaan doontaa inaad hesho mid cusub marka ciladdu soo shaac baxdo, tusaale ahaan, haddii ay tahay cilad isku-darka waxaad hubin doontaa inaad raadsato qiimo jaban qasabadaha qasniinka iibinta internetka.
Qodobbada ay tahay in la ogaado ka hor inta aan la beddelin tuubada
Waxyaabaha soo socda waa in la tixgeliyaa ka hor intaadan dooran inaad beddesho qasabadda:
Go'aamso Jadwalka Taabashada: Waxaa jira 4 nooc oo tubbo aasaasi ah: qaab kubbadeed, kartoonno, disc, iyo sidoo kale riixitaan. Mararka qaar nooca tuubada waxaa lagu ogaan karaa muuqaalka dibedda, si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah, qasabadu waa inay noqotaa mid aan kala go 'lahayn si loo go'aamiyo nooca tubbada ay tahay.
Kala Qaad Tubbada: Maamulayaasha isku heerka ahi waxay gashadaan dhammaan noocyada tuubbada markay bilaabayaan inay tuubada u kala jaraan adeegga dayactirka ama beddelaadda. Hayso dhammaan qaybaha iyo sidoo kale qaabka aad u kala horreeyso. Tani waxay runti kaa caawin doontaa labadiinuba inaad tubbada isku celisaan midba midka kale oo aadna aqoonsataan waxyaabaha la beddelayo.
Maxaad ula xiriiri kartaa xirfadle?
In kastoo howlaha dayactirka ee kor lagu soo sheegay ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin shaqooyinka DIY laakiin si loo ilaaliyo waqtigaaga qaaliga ah isla markaana si xirfad leh loo gaaro hadafka waa inaad la xiriirtaa khabiir tuubiste. Waad badbaadin kartaa xoogaa lacag ah adoo kaligaa sameeya laakiin haddii howsha dayactirka ay qalad noqoto waxay kugu kacaysaa labalaab.
Waxaan rajeyneynaa in tilmaamaha kor ku xusan ay hubaal kaa caawin doonaan markasta oo aad rabto inaad badasho qasabadahaaga ama qasabadahaaga dhaqaale.
Hore:: SIDEE LOOGU DOORAN KARAA QAADKA BATHROOM-KA Next: Siyaabaha u horseedaya xulashada qasabadda qasabadda jikada ugu fiican